Ukudlondlobala kweNingizimu Afrika kwelombhoxo kugadla ezitheni
ZILOKHU ziqhubekile ukuqubuka izinkulumo ezithi abaseNew Zealand nabase-Australia basinga ukukhipha iNingizimu Afrika kwiSuper Rugby Isithombe: ANA
Mthokozisi Mncuseni | May 28, 2020
KUYA ngokuya kucaca ukuthi ukukhula ngesivinini kombhoxo waseNingizimu Afrika kwakhela amaqembu akhona izitha kunokuthi kwandise udumo lwawo emhlabeni.
Kusukela uRassie Erasmus ethathe izintambo zokuqeqesha amaBhokobhoko ngenhloso yokubuyisela umbhoxo waseNingizimu Afrika esimeni esikahle, kusobala ukuthi umehluko uzwakala nasemazweni athathwa njengezitha.
Lona umbono ocacile uma uzokhumbula ukuthi emasontweni amabili edlule, iziphathimandla zombhoxo okudlala kuwona iVodacom Super Rugby, ziphoqeleke ukukhipha isitatimende ziphikisa amahemuhemu abekhomba ukuthi amaqembu aseMzansi angase akhishwe kulo mqhudelwano.
Sekuphinde kwavela futhi ukuthi lo mbono ukhona ikakhulukazi kwabase-Australia nabaseNew Zealand, abakhombisa izimpawu zokuthi sebanele ngamaqembu aseNingizimu Afrika kwiSuper Rugby.
Sekuvele namagama abadlali abaziwayo kwiNew Zealand nakwi-Australia, abebekhuluma bukhoma besemizini yabo ngempelasonto, bekuhlaziya ukuthi babona kungcono kudlalwe ngaphandle kwamaqembu aseNingizimu Aafrika, Japan nase-Argentina.
Kuthiwa kulabo badlali bekukhona noSam Cane, osanda kuqokwa njengokaputeni omusha weNew Zealand. UMichael Hooper ongukaputeni we-Australia uyena okuthiwa ubephambili kule nkulumo mpikiswano ebikhulunywa bukhoma ezinkundleni zokuxhumana.
Kuthiwa bonke laba badlali bavumelane ngo-elethu ngokuthi ukuqhubeka nokudlala nala mazwe akusabasizi ngalutho. Ngokwalaba badlali anele amaqembu asemazweni abaqhamuka kuwona.
Uma kunenkinga ngalokhu bathi okungabakhulisa kangcono ukuthi kufakwe namaqembu aseFiji nawaseTonga. Laba badlali babona amaqembu aseMzansi, Japan nase-Argentina, ebagidisa ndawonye kanti bazi ukuthi iNew Zealand ne-Australia bsangomakhonya bombhoxo.
Nakuba la mahlebezi elokhu eqhamuke njalo kodwa iSouth African Rugby Union (Saru) imile ekutheni inenkontileka esanda kuyelula neSuper Rugby, futhi iyadlula ku-2020. Ne-New Zealand inayo le nkontileka.